UParker, uRantie noCoetzee abajimanga neBafana | News24
UParker, uRantie noCoetzee abajimanga neBafana
Johannesburg – Abadlali abathathu beBafana Bafana abakwazanga ukuzilolonga neqembu ngesikhathi lizilolonga ngaphambi komdlalo waleli qembu neMali ngenxa yokulimala.
Ngokubika kweSoccerLaduma abadlali uBernard Parker, Tokelo Rantie noRivaldo Coetzee abazilolonganga neqembu ngoMsombuluko kodwa kuvele ukuthi bangase balithole ithuba lokudlala ngoLwesithathu uma iBafana isidlala neMali.
Laba badlali bobathathu badlala ngoMgqibelo ngesikhathi iBafana ibhekene neCameroon lapho lo mdlalo waphela ebambene ngelilodwa ngapha nangapha.
OLUNYE UDABA: ‘IBafana ingawudla umhlanganiso kowe-Afcon’
Okhululema iBafana uMatlhomola Morake ubhale enkundleni yokuxhumana iTwitter ukuthi bobathathu laba badlali balimale emdlalweni obungoMgqibelo kodwa bazobe sebekulungele ukudlala emdlalweni weMali ngoLwesithathu.
UParker ulimele ezimbanjeni, uRantie udonseke umsipha bese kuthi uCoetzee edolweni.
IBafana imatasa eGabon izilungiselela umqhudelwano wamazwe we-2015 Africa Cup of Nations ozodlalelwa e-Equatorial Guinea ozoqala ngomhlaka 17 kuJanuwari.
Kulindeleke ukuthi iBafana idlale umdlalo wayo wokuqala kulo mqhudelwano ngomhlaka 19 kuyona le nyanga ne-Algeria okuyiqembu elibalwa nahamba phambi e-Afrirka.